Umcamelo Block Ball Ukunikela Abakhiqizi, abahlinzeki - China Umcamelo Block Ball Amabombo Factory
Uchungechunge lokufaka okuphethe i-UCP 200 enembile
● Isakhiwo esiqinile, okulula ukusifaka.
● Indandatho ebanzi yangaphakathi: ilungele ukukhiya i-jacking, iqinile kangcono.
● Ucingo oluphezulu: izintambo ezimbili eziphezulu ezine-engela lama-degree ayi-120 eringini langaphakathi ukuqinisekisa ukufakwa okulula kwesibambo kushaft.
● Ukugcina iringi: kukhona eyodwa ezinhlangothini zombili, izovimba uthuli ngempumelelo.
● Thinta uphawu lwenjoloba: lufakwe ngaphakathi kwamasongo okugcina ezinhlangothini zombili kuya.
Umkhiqizi oyindilinga osabalazayo ufaka ibhola eliqukethe i-UCF
Ingaphandle eyindilinga eyisihlalo nesihlalo iyunithi ethwele ehlanganisa ukugoqa okuzala nesihlalo sokuthwala. Iningi lesakhiwo sangaphandle esiyindilinga lingububanzi obungaphandle bomkhakha, futhi ngembobo eyindilinga yangaphakathi enezindlu ezifakiwe ndawonye, ​​isimo sesakhiwo sihlukahlukene, siyashintsha futhi siyashintshana.
Ukufaka amanani ancintisanayo okuphethe i-UCFX00
Ubukhulu buphakathi kwe-UCF200 ne-UCF300, hhayi encane kakhulu, ipharamitha yesenzo esithile nokuklanywa kuyafana, umehluko ngobukhulu, uma ungenayo imfuneko yobude obuphakathi nendawo, obungangena esikhundleni esivamile.
I-XRL brand block eqondile yomcamelo ophethe i-UCFC
Ubuso besisekelo bunikezwa umphathi oyindilinga, ongabekwa emgodini oyisiyingi we-rack, ngakho-ke ukunemba kokufakwa kuphezulu futhi ukuma kunembile.
I-lug bearing nge-lug ngumkhiqizo oqukethe ukwakhiwa, i-lug bearing ne-lug bearing kanye ne-lug bearing ne-lug bearing ebusweni obukhuphukayo.
Insimbi engenalutho yokufaka i-block UCFL 200
Isakhiwo silula futhi kulula ukusifaka, esifanele indawo encane yezingxenye zokudlulisa. Ibanga lesikhungo lezimbobo ezimbili zomshudo liyahambisana nebanga lesikhungo semigodi yesikwele esihlanganisiwe semigodi yohlobo olufanayo.
Izicelo eziyinhloko ze-UCFL: ukufakwa kosayizi wezikhala omncane wemishini, i-roller conveyor, imishini yokudla, imishini yezemithi, njll.
Isakhiwo silula futhi kulula ukusifaka, esifanele indawo encane yezingxenye zokudlulisa. Ibanga lesikhungo lezimbobo ezimbili zomshudo lihambisana nebanga eliphakathi nendawo lesikhala esiyisikwele semigodi eboshiwe yohlobo olufanayo
Intengo yokuncintisana faka ikhwalithi ephezulu ethwala i-UCFL 300
Uhlobo lwe-XRL lomkhiqizo faka amabheringi UCT200
Ibhlokhi yesilayidi ilungele izinhlelo zokusebenza ezidinga ukulungiswa kwe-shaft namadivayisi wokuqinisa amabhande, njengokufaka kwezinhlelo zokuhambisa. Inezinhlobo ezimbili: isihlalo se-cast iron slide block nesihlalo sensimbi esine-stampu sensimbi; Ifomu ngalinye linezinhlobonhlobo zezinhlelo zokukhiya ongakhetha kuzo. Ama-block block ama-iron iron alungele ukusetshenziswa okujwayelekile komthwalo; Ibhuloki lensimbi yesilayidi ilungele ukusetshenziswa kwezomnotho nokukhanya okulula.
Vimba ukufaka okune-UCT300